Afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester United guusha ka gaartay Fulham ee Premier League – Gool FM
Afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester United guusha ka gaartay Fulham ee Premier League
(London) 09 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul 3-0 ka soo gaartay naadiga Fulham oo ay ku booqatay garoonkeeda Craven Cottage kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Labo gool oo uu dhaliyey Paul Poga iyo mid kale oo uu saxiixay Martial ayaa Manchester United kaga filnaatay in guul ay ka soo qaataan Fulham, waxaana kooxda macallin Ole Gunnar Solskjaer ay saldhigatay kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester United guusha ka soo gaartay kooxda Fulham:-
>- Manchester United ayaa soo tiigsatay kaalinta afaraad ee horyaalka Premier League tan iyo maalintii ugu horreysay horyaalka xilli ciyaareedkan markaasoo ay hoggaanka qabteen markii ay 2-1 uga adkaadeen Leicester City.
>- Kooxda Fulham ayaa guuldarreysatay 20 kulan oo ay horyaalka Premier League ku wajahday Manchester United waxaana ay guul gaareen kaliya saddex kulan.
>- Manchester United ayaa guuleysatay lix kulan oo xiriir ah oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda (away) tartammada oo dhan markii ugu horreysay tan iyo bishii May sanadkii 2009-kii.
>- Paul Pogba ayaa dhaliyey 11-gool oo horyaalka ah hal xilli ciyaareed gudihiis markii ugu horreysay xirfaddiisa ciyaareed.
Arsenal oo dib ugu soo laabtay wadada guusha...+SAWIRRO
Real Madrid oo muddo kaddib soo xiratay kaalinta 2-aad kaddib guul wayn ay ka gaartay Dariskeeda Atletico....+SAWIRRO